Sha Po Lang (Priest) Myanmar Translation - Autumn - Wattpad
Sha Po Lang (Priest) Myanmar Translation
2.9K Reads 269 Votes9Part Story
By Autumn260103 Ongoing - Updated Sep 10
The Great Liang Dyansty...အရှင်သခင် Liang ဘုရင်အုပ်စိုးသော ခေတ်၊ ကျေးလက်ဒေသတွင် နေထိုင်သော Cheng Geng ဆိုသည့် လူငယ်လေးမှာ မိခင်ဖြစ်သူက အတူနေထိုင်ပါလျက် နွေးထွေးကြင်နာစွာ စောင့်ရှောက်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် ဖခင်ဖြစ်သူကလဲ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အမြဲတစေ ခရီးထွက်နေရလေသည်။ သူ့ရဲ့ဘဝမှာ ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းရမည့် အဖော်ဟူ၍ ကလေးငယ်လေး နှစ်ယောက်ရယ်၊ သူ့ကိုစာသင်ပေးသူ ဆရာရ်ာနှင့် သူ့ရဲ့ မွေးစာအဖေတို့သာ ဖြစ်လေသည်။ တစ်ရက် သူတို့ရွာလေးကို အရိုင်းအစိုင်းလူအုပ်ရဲ့ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုအပြီး သူ့ဘဝတစ်ခုလုံး ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်သလို ပြောင်းလဲခဲ့လေသည်။ သူထင်ခဲ့သလို အဖေ အမေ ပြည့်စုံစုံနှင့် မွေးစာအဖေတို့၏ အချစ်ကို ခံယူခဲ့ရသည်ထင်သော ဘဝသရုပ်အမှန်က သူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်သက်သက်သာ ဖြစ်နေသောအခါ.....
Crd.. to... Priest ( original novel)
Northwest flower( eng translation)
Introduction- Title Explanation
Chapter 1- The border
Chapter 2- Yifu.. (မွေးစားအဖေ)
Chapter3- Renowned General
Chapter 4- Giant Kite
Chapter 5- Xiu Niang
Chapter 6- Cursed
Get notified when Sha Po Lang (Priest) Myanmar Translation is updated
#267 in star See all rankings
2.5K 455 17
ရှီကျာသည်﻿ ငယ်﻿စဉ်﻿ကတည်းက ယင်﻿စွမ်းအင်﻿များ အား﻿ကောင်းလွန်း﻿သူတစ်﻿ဦးဖြစ်﻿ကာ ﻿နေ့စဉ်﻿﻿နေ့တိုင်း သရဲတ﻿စ္ဆေများအားကြုံရ၊ဆုံရ၊မြင်﻿ရသည်﻿။
တစ်﻿﻿နေ့မှာ﻿တော့ ရှီကျာရဲ့ကာကွယ်﻿﻿ရေးအ﻿ဆောင်﻿﻿ကျောက်﻿သည်﻿ မ﻿တော်﻿တဆကျိုးပျက်﻿သွားခဲ့သည်﻿။
အာကာသအခရာ တ﻿စ္ဆေဖမ်းသူယဲ့ကျင်းရှီသည်﻿ ရှီကျာအားကူညီ﻿ပေးဖို့﻿အ﻿﻿﻿ကြောင်းဖန်﻿လာခဲ့သည်﻿။
အာကာသအခရာ တ﻿စ္ဆေဖမ်းသူများအားလုံးက တရားဝင်﻿ဆရာသခင်﻿များလား?
WeChatအ﻿ကောင့်﻿များ၊ Taobao online shopsများတွင်﻿ ﻿လူပြိန်းကြိုက်﻿သတင်းအတင်းအဖျင်းများအား ရှီကျာ﻿နေ့တိုင်းကြည့်﻿ရှုသည်﻿။
ထိုမှစ၍  ရှီကျာတွင်﻿ ကန့်﻿သတ်﻿ချက်﻿များပိုပို﻿လျော့ကျလာကာ ယုံကြည်﻿ကိုးစားမရသည့်﻿အာကာသအခရာ တ﻿စ္ဆေဖမ်သမားတစ်﻿စုနဲ့ဆုံခဲ့ရသည်﻿။
Love Him Till Eternity ( Myanmar Translation...
Love Him Till Eternity
Full Credit to original author.I own nothing,I'm just translation it 'cause I love it.
6.6K 694 32
3.1K 259 9
ငါ့ဘဝဟာ ပျောက်ကွယ်ဖို့ စတင်မှေးမှိန်တဲ့အချိန် ရောက်ရှိလာတယ်.. ။ ငါ့ရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ အသံ တစ်ခုကို ကြားခဲ့တယ်.. ။
[ System ဟာ Host ကို ဆက်သွယ်ခြင်း စတင်ပြုလုပ်နေပါသည်.. ။ ဆက်သွယ်ခြင်း ပြီးဆုံး..။]
ဟမ်..! ခဏ..! System ကဘာကြီး??? ...
ပြီးတာနဲ့ ငါ့ဘဝကြီးကလည်း ပျောက်သွားပြီး ငါ့ရဲ့ ဝိဥာဏ်ဟာလည်းပဲ ဝဲဂယက်တစ်ခုရဲ့ စုပ်ယူခြင်းခံသွားရတယ်.. ။
အို ဘုရားသခင် ဘာတွေများဖြစ်နေတာလဲ..။
[Novel Myanmar Translation]
我的玉皇上帝 [ Wo De Yu Huang Shangdi ]
1K 443 27
ကျွန်တော်တို့ နတ်ဘုံမှာ... အုပ်ချုပ်တဲ့ ကျောက်စိမ်းဧကရာဇ်မင်းက သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်...
သူ့ရဲ့အပြစ်ပေးပုံတွေကလည်းတကယ်ဆန်းဆန်းပြားပြားတွေချည်း...။ ဟိုတစ်ခါကဆို အပြစ်မဲ့တဲ့လူကို သတ်မိလို့ မြွေအဖြစ်တစ်နှစ်လောက်သွားနေလိုက်ရပြီး  အဆိပ်တောင်မရှိလို့ အခြားမြွေတွေအနိုင်ကျင့်တာခံလာရတဲ့အပြင် သေတာတောင် ရှားရှားပါးပါးမိုးကြိုးပစ်ခံရပြီးမှ ပြန်တက်လာနိုင်တဲ့ နတ်တစ်ပါးတောင်ရှိသေးတယ်...။
သူက ဘယ်သူ့ကိုမှမကြည်ပုံပဲ... အုပ်ချူပ်ရေးပိုင်းမှာပြောစရာမရှိပေမယ့် သူ့ကိုယ်တော့ အကုန်လုံးက ကြောက်ကြရတယ်...။  သူ့ဇာမဏီမျက်ဝန်းတွေက အမြဲလိုလုမီးလျှံများထတောက်နေတတ်ပြီး အနီရောင်အနားကွပ်လေးတွေနဲ့ ဖြူစင်သန့်ရှင်းလှတဲ့ အဖြူရောင်ဝတ်ရုံကို အမြဲဝတ်ဆင်လေ့ရှိတယ်...။
အင်မတန်အင်မတန်ကို အင်အားကြီးမားပြီး သိပ်လည်းကြောက်စရာကောင်းလွန်းလှ
S.C.I Mystery Special Criminal Investigation...
1.2K 134 17
Original Author-Er ya
3.1K 814 60
18.4K 2K 95
ဆရာမ MXTX 3rd Novel မှ
မြတ်နိုးရသော ဟွားလန့် ♥
NO VILLAIN? No Problem![Mm Translation]
787 204 36
ချန်းရီဟိုက် ကသာမန် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေတစ်ယောက်နဲ့ မလိုက်အောင် အကြွေး လေးတွေပတ်လည်ဝိုင်းနေရှာတယ် သူက villain ဇာတ်ကောင်တွေကိုပဲသဘောကျနေရာကနေ ဝတ္ထုထဲရောက်သွားပြီး ဘယ်လိုပေါက်ကရတွေနဲ့ ဇာတ်လိုက်လိုက်နဲ့ ဘယ်လိုကတိကအောက်လေးတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ.......အဟမ်း...သိချင်ရင်ဝင်ဖတ်ပြီး vote and followed ပေးခဲ့နော်
Svss နဲ့နဲနဲ ဆင်ပါတယ် ဆရာ တပည့် ကြားက အချစ်သံယောဇဉ်လေးပေါ့
I'm not owned this novel just translat..
#Haveanice day.....
5.4K 1.3K 75
Trọng Sinh Siêu Mẫu • 重生超模
Pairing: Xi Ze × Ming Yu